व्यस्त प्रदीप, ‘लिलिबिली’ लिएर जापान पुगे « Ramailo छ
व्यस्त प्रदीप, ‘लिलिबिली’ लिएर जापान पुगे
प्रकाशित मिति : Mar 31, 2018
फिल्म रिलिजको मुखमा स्टारको व्यस्तता कतिसम्म हुन्छ ? व्यस्तताको अनुभव यतिबेला नायक प्रदीप खड्काले लिइरहेका छन् । चैत ३० गते ‘लिलिबिली’ रिलिजको पर्खाइमा रहेका प्रदीप शुक्रबार अति व्यस्त भए ।
शुक्रबार आर्मी अफिसर्सको फान अवार्डमा प्रदीप हतार हतार पुगे । उनी पुर्वी शहरको ‘लिलिबिली’ प्रचारबाट सिधै अवार्ड समारोहतर्फ पुगेका थिए । अवार्ड हल भित्र प्रवेश गरे लगत्तै प्रदीप स्टेज उक्लिए । प्रधानमन्त्रीबाट ‘राइजिङ स्टार’को अवार्ड ग्रहण गरे । लिलिबिली शोको लागि जापान उड्नु परेका कारण अवार्ड समारोहमा पनि प्रदीप पुरा बस्न पाएनन् । नायिका जसिता गुरुगं सहित उनी रातीको फ्लाइटमा जापान उडे ।
आइतबार हुने जापानको ‘लिलिबिली’ प्रिमियरमा प्रदीप, जसिता र निर्माता गोविन्द शाही सहभागी हुँदैछन् । त्यहाँको शो सकेर प्रदीपको टिम पुनः लिलिबिली प्रचारमा जुट्नेछ । प्रदीपको यो व्यस्तताले कत्तिको सार्थकता पाउँछ ? त्यो भने चैत ३० सम्म कुर्नै पर्छ । हेर्नुस् फान अवार्डको भिडियो :